Siyaasiyiinta Madowga ah ee raba in Afrikaanku ay ka baxaan Talyaaniga!. - NorSom News
Siyaasiyiinta Madowga ah ee raba in Afrikaanku ay ka baxaan Talyaaniga!.
Dalka Talyaaniga waxaa dhowrkii sano ee ugu danbeeyay kusoo xoogeysanaya xisbiyada garabka midig oo dalkaas taageero xoogaan ku yeeshay.
Xisbiyada midigta, gaar ahaan xisbiga dhaq-dhaqaaqa shanta xidig iyo Leage, ayaa caan ku ah siyaasad adag oo soo galootiga looga hortago. Waxeyna dad badan oo Afrikaan iyo ajaaniib kaleba isugu jirto ka codsadeen inay dalalkoodii ku noqdeen.
Marka laga soo tago siyaasiyiinta cadaanka ah ee xisbiyadaas hogaamiyo ama xilalka sare ka hayo, waxaa jiro ajaaniib taageersan ama kamid ah xisbiyadaas.
BBC-da ayaa warbixin ka diyaarisay labo siyaasi oo asal ahaan Afrikaan, hadana kamid ah xisbiyadaas, kana codsanayo ajaaniibta kale ee Afrika ka timid inay dalalkoodii ku noqdaan.
Halkan kasii akhir: BBC-SOMALI
Previous articleDowlada oo rabta in Nimanka Norwiijiga ah lagu adkeeyo inay Norway keenaan, xaasas ay dibadda kasoo guursadeen.
Next articleKeshvari oo maanta ay maxkamad xabsi ku xukuntay.